No …..,No ….. | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » No …..,No …..
No …..,No …..
Posted by ဇီဇီ on Jan 25, 2013 in Creative Writing, My Dear Diary | 51 comments
ဆင်တူ၊ ဆက်စပ်အောင် အတတ်နိုင်ဆုံး ရွေးထားပါ၏။
(ကြားဖူးမှာပါ။ ပိုက်ပိုက်မရှိရင် ပျားရည် ဝယ်လို့ ရဘူးလို့ပဲ မှတ်။ အဟိ)
(လူတိုင်းသိပြီးသားပါ။ အနာခံမှ အသာစံရ ဆိုလားဘာလား။)
No food, No mood
(Diet plan နဲ့တုန်းက အလုပ်လုပ်ချင်စိတ်မရှိလို့ တွေ့ရှိထားတဲ့ စကား)
No foot, No boot
( Site ထဲ Safety Boot အလေးကြီးနဲ့သွားရလွန်းလို့ တွေးမိတာ။ အဟက်)
No bake, No cake
No faith, No saint
(မှန်တယ်လို့ ပြောလို့ရသလား တကယ်မသိ။)
No fear, No tear
(လိုက်အောင်စဉ်းစားထားတာ။ လူတိုင်းအတွက် မမှန်)
No light, No sight
(ဒါလည်း ချွင်းချက်ရှိတယ်။ ကိကိကိ)
No kiss, No miss
No wife, No life
(မှတ်လော့၊ မှတ်လော့။ လူပျိုကြီး/လတ်/ငယ် တို့။)
နောက်ဆုံးတစ်ခုက စကားလုံး သိပ်မလိုက်ဖက်သလို ကာရန်လည်း သိပ်မငြိသလိုပဲ။ ပြောချင်လို့ကို ပြောတယ်ကွာ။
No hubby, No worry
(ဟီး။ မှတ်လော့။ မှတ်လော့။ အပျိုကြီး/လတ်/ငယ် တို့မှတ်ကြလော့)
နောက်ဘယ်သူတွေ ဘာစကားတွေဆက်ကြမလဲ လို့လဲစောင့်ဖတ်ကြည့်နေပါအုံးမယ်…
ပထမဆုံးလာမှတ်တဲ့ (ဘာတွေမှတ်သွားမှန်းတော့ မသိ) ကြည်ဆောင်းလေးကို ကျေးဇူးပါ။ :hee:
Ordessy : My Name is “No One”
and beatsaCyclop in the eye.
Cyclops yeilds: “No One beats me”
then other Cyclops don’t take care about him.
အဲ !! ဂီဂီရေ…
ကျုပ်ကြားဖူးတာက “Nobody hurts me” ဆိုလားပဲ။
ဒါ ဘယ်ထဲကတုန်း ကဗျာရှည်ထဲကလား။
Yes, u r right!!
‘I like you, Greek,’ he said. ‘I’m going to do youafavor. What’s your name?’
‘My name is Nobody,’ I told him.
It turned out that the favor he intended was to eat me last. But when the wine had knocked him out, I put my plan into effect. Heating the end of the pole until it was glowing red, we ran it toward the Cyclops likeabattering ram, aiming it for his eye and driving it deep. The thing sizzled like hot metal dropped in water while I twisted it like an auger.
‘What is it, brother?’ they called inside. ‘Is someone harming you?’
‘It’s Nobody!’ bellowed Polyphemus.
‘Then for the love of Poseidon pipe down in there!’
No ကို ဘာသာပြန်ရင် ဟင့်အင်း မလားဗျ..။
No money ကိုပဲ ကြည့် ..။ ဘာသာပြန်ရင် ပိုက်ဆံမရှိဘူး တဲ့..
ဟင့်အင်းပိုက်ဆံ လို့မှ ပြန်လို့မရဘဲ…။
No ကို မဟုတ်ဘူး မရှိဘူး မဖြစ်ဘူး လို့ သင့်လျှော်သလိုပြန်မယ်ဆိုလည်း
ပြန်လို့တော့ ဖြစ်နေသားပဲ.. ဒါပေသိ No ဆိုတဲ့ Noun မှာ
-ဖြစ်-ရှိ-လုပ် စတဲ့ ကြိယာမပါဝင်နေဘူး ဆိုတာပါပဲ.
သည်တော့ မြန်မာပြန်ရင် ကြိယာ မကူရင် မရတာမို့
No ရဲ့ ထပ်တူစကားလုံးမရှိတာမို့ ကူနေရတယ် ဆိုတာ
ငြင်းမရဘူးမဟုတ်လားဗျ…။ ဘာလို့ မြန်မာစာလုံးမပေါ်သလဲဆိုရင်
No money ကို ရှေးရှေးကတော့ အသပြာ နတ္ထိ လို့ သုံးမပေါ့လေ။
(အသပြာရော နတ္ထိရောက မြန်မာစာလုံးမှ မဟုတ်ဘဲ ..ပါဠိတွေကိုး)
ဘိုးဘေးစဉ်ဆက် ကိုယ့်နိုင်ငံ ကိုယ့်လူမျိုး နဲ့ နေခဲ့ပေမယ့် ကိုယ့်စာပေကို မချီးမြှောက်ခဲ့ဘဲ
ပါဠိလက်အောက် ကျွန်သဘောက်ဘ၀နေခဲ့ကြတာ ပြောပါတယ်။
ဤတွင် သဂျီးရောက်လာပြီး အနီဂိုဏ်းအား မီးဒုတ်ရှို့စေသတည်း….။
ဒီနေရာ တော့ quantifier အနေနဲ့ သုံးတယ်လို့ မှတ်ထားဖူးတာပဲ။ (မသေချာ)
မြန်မာလိုရော….. ဆီလျော်အောင် ဘာသာပြန်လို့ပဲ တတ်တယ်။ မြန်မာ စာလုံး အတိအကျက တော့…… (အင်း ဒါလည်း မသေချာ)
မသေချာတာများတဲ့ တူတူ ဘာမှ ပြောတော့ပါဘူးလေ။ ရှို့ချင်တာသာ ရှို့ကြပါတော့……
ဂီဂီ ရဲ့ Avatar ကိုပါ ၊
ဒိုဘာမန် ပုံ ပြောင်းလိုက်ပါလား ။
ခိုင်ဇာလည်း လိပ်မျိုးပဲ။ အမျိုးချင်းတူလို့ အားပေးသွားပါတယ်။ :hee:
ဒီလောက် လိပ်ကျ တာကို ကိုယ့်ဆီက ပါ ပါ သွားလွန်းလို့ပါ မမရယ်။ :harr:
No…….., No…….. တွေကို ဖတ် မှတ် သွားတယ်ဗျာ။
ပြောချင်လို့ပြောတဲ့ စကားကိုတော့ သဘောကျမိတယ် ဘာတဲ့…
No hubby, No worry ဆိုဘဲ။
ဟီး။ ဒါတောင် စာလုံး မတူ၊ ကာရန်မငြိတဲ့ တူတူ No wife, No fight ဆိုတဲ့ စကားကို လိပ်မျိုးမို့ ချန်ထားခဲ့တာ။
တစ်စုံတစ်ယောက် ပြောခဲ့တဲ့ စကားလေးပေါ့ဗျာ။
ဒါနဲ့  Noသဇင် ဆိုရင် ဘယ်လို ဆက်ပြီးပြောရပါ့ … ???????
အဲလာတော့ ကွကိုယ် စဉ်းစားပါ ကိုရင် ဆာမိ။
ခံစားချက်တွေ အကုန်လုံး ငါ့မှာ မျက်ရည် မရှိတော့ဝူးဝူးဝူး……..
“””ခံစားချက်တွေ ပျက်စီး ငါ့မှာ မျက်ရည်ရှိတော့ဘူး”””
တိမ်မည်းငိုရင် မိုးသည်းမှာ စိုးလို့….
No Cure – No Pay တဲ့
Marine လောကမှာ သုံးတာပါ။
တိုက်ရိုက်အသုံးကတော့ ဆေးကုလို့ မပြောက်ရင် ပိုက်ဆံ မပေးဘူးလို့ပြောတာဖြစ်မယ်ထင်ပါတယ်။
သင်္ဘောတစ်စီးက ပျက်နေလို့၊ ဆက်သွားလို့မရတော့လို့ နောက်တစ်စီးကဆွဲရတော့မယ်ဆိုရင် Lloyd’s Open Form ဆိုတဲ့စာရွက်ကိုသုံးရပါတယ်။ စာချုပ်သဘောမျိုးပေါ့။
အဲဒီမှာ No Cure – No Pay ဆိုပြီးရေးထားပါတယ်။ ရောက်လိုရာ၊ ဖေါ်ပြထားတဲ့နေရာ အထိ မပို့ပေးနိုင်ရင် တစ်ပြားမှ မရပါဘူးဆိုတာပါဘဲ။
လမ်းကြုံလို့ ဆွဲသွားပြီးမှ ငါမပို့နိုင်တော့ဘူး၊ နောက်တစ်စီးငှားပါ ဆိုရင် ပထမဆွဲခဲ့တဲ့သင်္ဘောက တစ်ပြားမှ မရပါဘူး။
မြန်မာပြည်မှာ ဘစ်ကားတွေ လမ်းမှာပျက်လို့ နောက်တစ်စီးပြောင်စီးရရင် ပေးထားတဲ့ပိုက်ဆံ ပြန်တောင်းကြပါ။
ကျနော့ဆီမှာ No ….., No …. နဲ့ တခြား စကားလုံးတွေ ရှိပါသေးရဲ့။ ကာရန်မကိုက်လို့ မထည့်ဖြစ်တာပါ။ :hee:
No Budget ,No Project
အယ်။ ဟုတ်တယ်။ ဟုတ်တယ်။
ရွှေအိလေး ကို ကျေးဇူးတင်တယ်။
ကိုယ့် အနီးဆုံး ဒီ စာလုံးကို ဘာလို့ သတိမရတာလိမ့်။
(လပ်ပေး လပ်ယူ အားပေးတာဟုတ်ပါဘူး။)
(လာဘ်ပေးလာဘ်ယူ အားပေးတာဟုတ်ပါဘူး။) :harr:
ဟီး။ စာရိုက်ကတည်းက မှားမှန်းသိတယ်။
ဒါပေမဲ့ ဘယ်ဟာ အမှန်တုန်းဆိုတာ စဉ်းစားလို့ကို မရလို့။
ခု ပြင်လိုက်ပြီ။ ကျေးဇူးပါ တက်တူးဆရာ။
no love, no yes
ဘာ ဘာ ဘာမှ မဆိုင်။
အခြစ်ကိစ္စ အတွက် အစဉ်ပြေအောင် ငှက်ပျောတုံးကြီး ပို့ထားတယ်လေ။
No kiss , No miss မွှားတယ် မွှားတယ် မိဗုံဖြင့်လွမ်းပါ့ လွမ်းပါ့ မမခိုင်ဇာကို ဒုတ်ထိုးစားတိုင်း :harr:
ဟယ်။ ဒီ ကလေးမ!
ကာရံတော့ မညီဘူး.. အများကြားဘူးကြတဲ့ သီချင်းစာသားတစ်ခုပါ
အဲဒါပဲ မှတ်မိလို့ :harr:
No marry, No worry ကောရလားဟင်င်င် :harr:
No marriage, No ……. ????
ဟီး!! သိတော့ဘူး။ လိုရာသာ ယူကြပါကွယ်။
Brain မရှိလည်း Gain နေတဲ့လူတွေ ပြည့်လို့ပဲဟာပဲဟာပဲကို……
No brain, No drain ဆိုရင်…….???
Brain Drain ပြသနာ ရှိနိုင်တော့ဘူးလားဟင် ?? :harr:
No mother, No Water (assume – water=money)
အမေကို အပူကပ်နေကျ ထင်တယ်။
~~~Love is likeaflame
Burns you when its hot
ဟိုဘက်က ကဗျာတစ်ခု မှာတော့ ဓာတ်နဲနဲပေါက်နေတာနဲ့ All the fuck လို့ ဟီးဟီး… ဆက်ထားတော့ မိဂီက သန်ရာ သန်ရာတဲ့… ဆဲတာသန်ဒယ်လို့ပြောတာထင်ဘာဒယ်.. အမယ်မင်း အခုတစ်လော ဂျမ်းဒေါ ဖစ်နေလို့ နုနုရွရွတွေ စိတ်ကူး မယဉ်အားပါဘူး အေရယ်
ကျုပ် ပို့(စ) မှာ တော့ ကြိုက်ရာသာ အော်သွားပါ။ စိတ်ချမ်းသာရင်ပြီးရောပါ။ နုနုရွရွဖြစ်စရာမလိုပါဘူး….
ဒီစကားလုံးကတော့ ရှိသော်လည်း ဒီ ပို့(စ) မှာ တော့ လက်ရှောင်ပါတယ်။
ငယ်ငယ်က အဖေ့ဆီ မုန့်ဘိုးတောင်းရင် အဖေကပြောတယ် …………..။ ဖိုးရှမ်းကြီးတိုင်ဖက်တဲ့ ကလေးဆိုတော့ ဘာလဲလို့ဆက်မေးတော့ No money, I have. တဲ့ အဲဒိတော့ ကလေးတို့ဘာဝ စကားအစပ်က မိနေတော့
No money, I have. ဖိုးရှမ်းကြီးတိုင်ဖက်
ဖိုးရှမ်းကြီးတိုင်ဖက် No money, I have.
ဆိုပြီး အော်တာပေါ့ ….. ပျော်ဖို့တော့ကောင်းတယ် ဘာမှန်းမသိဘဲရမ်းအော်တာ ……..။ နောက်အတန်းလေးနဲနဲရလာမှ ငါ့မှာပိုက်ဆံမရှိဘူးလို့ပြောမှန်းသိတာ………
ဖိုးရှမ်းကြီး ပိုက်ပိုက်လာချေးတုန်းကမှ ဒီစကား မပြောလိုက်ရ။
When I was younger, ကျွန်ုပ်ရမ်းကားစဉ်အချိန်တုန်းက မှတ်သားဖူးတာလေးရှိပါတယ်
No Risk, No Kiss တဲ့ဗျား
တကယ်တော့ ဘဝဆိုတာ Risk တွေကြားထဲမှာ Kiss တွေကိုရှာနေရတာပဲမဟုတ်ဘူးလား
အေးချမ်းတဲ့ဖြေသိမ့်မှု တစ်ခုရဖို့အတွက် Risk အများကြီးယူရတာ ထုံးစံပဲလေ
ဒါလည်း မှတ်ထားရဦးမယ်။ ကျေးဇူးပါ။
ဒီစကားကြီးနဲ့ ရမ်းကားတဲ့ အချိန်တုန်းက ဆို ဖက်ဖက်ကို ဘယ်သူမှ နိုင်မယ် မထင်။
No energy , No work
No work , No pleasure
No pleasure , ???????
မိန်းခေးများ ဖတ်ဘာရန် ..
“No Lover, No Cover”
“No Lover, No waydanar”
“No Money , No Honey ” တဲ့ ဆွိရဲ့ ကျန်သေးတယ်
ဒီလိုပို့စ်မျိုးလေးနဲ့ ၀ိုင်းပီးသိသလောက်ပြောကြတာ သဘောကျသဗျာ..တကယ်..တစ်ခုခုဝင်ရေးချင်လွန်းတော့
ကွကို ဘရိန်းစထျောင်းမီး လုပ်ဖြစ်တာပေါ့…ဂွတ်ဒ် :loll:
အာ့ဆို သိသလောက် ပြောသွားးး
အပေါ်မှာ ကျောပီးပီကို…အေးပါလေ ရောက်တုန်းလေး ကျောကျအုံးမယ် ငိငိ
No sale, No pay ဒီလအရောင်း ကျနေလို့
No dear, No tear :loll: တစ်ကောင်ကြွက်
No die, No cry လျှောက်ရေးတာ